Duullimaadyada San José ilaa Chicago waxay ku soo laabtaan American Airlines
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Duullimaadyada San José ilaa Chicago waxay ku soo laabtaan American Airlines
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Adeegga aan joogsiga lahayn ee Chicago-O'Hare ee Mineta San José Airport wuxuu ku soo noqdaa diyaaradda American Airlines.
American Airlines waxay dib u bilaabaysaa adeegga San Jose-Chicago.
Diyaaradaha Mareykanka ayaa isticmaali doona Boeing 737-800 diyaaradood oo ah jidka San Jose-Chicago.
Gegida dayuuradaha ee San Jose wuxuu sii wadaa inuu u baahdo xirashada maaskaro.
Mas'uuliyiinta Norman Y. Mineta San José International Airport (SJC) ayaa ku dhawaaqay in adeegga maalinlaha ah ee aan joogsiga lahayn ee Madaarka Caalamiga ah ee Chicago O'Hare (ORD) uu maanta dib uga bilaabanayo American Airlines. Adeegga la ballaariyay ee u dhexeeya Dooxada Silicon iyo The Windy City wuxuu shaqeeyaa afar jeer toddobaadkii, Talaado ilaa Jimce.
Duulimaadku wuxuu ka ambabaxayaa San José markay tahay 1:07 PM PST isagoo saaran diyaarad Boeing 737-800, wuxuuna yimid Chicago qiyaastii 4.5 saacadood kadib 7:40 PM CST.
“Waa wax lagu farxo inaan ku soo dhoweeyo adeegga American Airlines adeegga Chicago,” ayuu yiri John Aitken, Agaasimaha Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Mineta San José. “In kasta oo tani ay tahay tilmaan kale oo togan oo soo -kabashada ah, waxaan u dabbaaldegeynaa fahamka ah in socotadu ay ku dadaalaan caafimaadka iyo badbaadada. Waxaan u hambalyeynaynaa la -hawlgalayaasheena Mareykanka tallaabadan horay loo qaaday waxaana uga mahadcelineynaa sii wadidda maalgelinta Silicon Valley. ”
In kasta oo ku -noqoshada adeegga aan joogsiga lahayn ee magaalooyinka waaweyn ay u taagan tahay astaan ​​wanaagsan oo soo -kabashada safarka, iyadoo heerarka COVID ay ku sii kordhayaan gobollada qaarkood, Madaarku wuxuu sii wadaa inuu u baahdo xirashada maaskaro wuxuuna ku dhiirri -galiyaa safrayaasha inay sii wadaan ku -dhaqanka fogeynta bulshada.
Chicago-O'Hare wuxuu ku soo noqonayaa liiska adeegga hawada ee Mareykanka ee SJC ka dib markii la joojiyay adeegga diyaaradda 2020 sababtoo ah hoos u dhac ku yimid dalabka safarka ee la xiriira COVID-19.
Madaarka Caalamiga ah ee Mineta San José (SJC) waa gegida diyaaradaha ee Silicon Valley, oo ah shirkad iskeed u taageerta oo ay leedahay oo maamusho Magaalada San Jose. Gegada dayuuradaha, oo hadda ah sannadkiisii ​​71aad, wuxuu u adeegay ku dhawaad ​​15.7 milyan oo rakaab ah sannadka 2019, iyada oo adeeg aan joogsi lahayn laga helo Waqooyiga Ameerika iyo Yurub iyo Aasiya.